युरोकप २०२० लाई कसरी सम्झने?
युराेकप २०२० विशेष खेलकुद समाचार
प्रकाशित: सोमबार, असार २८, २०७८, १८:२३:०० नेपाल समय
काठमाडौं- आइतबार राति लण्डनस्थित वेम्बली स्टेडियममा इङ्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै इटलीले उपाधि जितेसँगै युरोकप २०२० सकियो। इटालीले घरेलु टिमलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै जित निकालेको थियो।
१९६० मा पहिलोपटक फ्रान्समा आयोजना भएको प्रतियोगिताको यो १६ औं संस्करण थियो। सर्वाधिक तीनपटक उपाधि जितेका जर्मनी र स्पेनले फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न नसकेपछि इङ्ल्याण्ड पहिलोपटक फाइनल जित्ने तयारीमा थियो।
तर उसलाई हराउँदै इटालीले दोस्रोपटक युरोकप जित्यो। महामारीको कारण एक वर्ष धकेलिएर भएको प्रतियोगितामा धेरै रंगशालमा सामाजिक दूरी कायम गरेर दर्शक राखिएको थियो।
युरोकप २०२० का कतिपय कुरा विर्सनलायक बने भने कति कुराहरु सम्झनलायक रहे। जसमध्ये यहाँ केही विषयको चर्चा गरिएको छ :
फिनल्यान्ड–डेनमार्कको पहिलो खेलको ४२ औं मिनेटमा मैदानको टचलाइन छेउमा थ्रोइन लिन अघि बढिरहेका थिए – क्रिस्टियन एरिक्सन। उनी अचानक सन्तुलन गुमाउँदै त्यहीँ लडेर बेहोस भए।
रेफ्री एन्थोनी टेलरले तत्कालै खेल रोके र मैदानमै एरिक्सनको उपचार सुरु गरियो । पछि थप उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएका एरिक्सनलाई हृदयघात भएको रिपोर्ट आयो।
यस घटनाका कारण युरोकपको सुरुवात त्यति सुखद बन्न सकेन । भोलिपल्ट डेनमार्कका अधिकांश पत्रिकाले हेडलाइन छापेका थिए, ‘खेल त हारियो तर ज्यान बच्यो।’ किनभने डेनमार्कविरुद्ध फिनल्यान्डले १–० गोलको जित निकालेको थियो।
दोस्रो खेलमा पनि डेनमार्कले बेल्जियमसँग २–१ गोलले हार बेहोर्‍यो। यद्यपि तेस्रो खेलमा रसियालाई ४–१ गोलले हराएर डेनमार्कले युरोकपमा पुनरागमन गर्‍यो। अन्ततः डेनमार्क सेमिफाइनसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भयो। यो सिजन डेनमार्कका लागि सम्झनयोग्य रह्यो।
यी हुन्, एरिक्सनको जीवन बचाउन सहयोग गर्ने 'नायक'
दुईपटक तोडियो - एउटै रेकर्ड
इङ्ल्याण्डका युवा खेलाडी जुड बेलिङ्घले क्रोसियाविरुद्ध सर्वाधिक कम उमेरमा महादेशीय प्रतियोगिता युरोकप खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। त्यसको ६ दिनमै उनको रेकर्ड भंग भयो। पोल्यान्डका कापर कोजलोस्कीले स्पेनविरुद्ध डेब्यू गर्दै सबैभन्दा सानो उमेरमा डेब्यू गर्ने खेलाडीको रेकर्ड आफ्नो नाममा गरे।
त्यसअघि २०२० को जुन १३, शनिबार राति इङ्ल्याण्ड–क्रोएसियाबीच भएको खेलको ८२ औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेर बेलिङ्घले कीर्तिमान बनाएका थिए – १७ वर्ष ३४९ दिन को उमेरमा।
बेलिङ्घले नेदरल्यान्ड्सका जेट्रो विलियम्सले ९ वर्षअघि (२०१२)मा बनाएको १८ वर्षे कीर्तिमानलाई भंग गर्दै रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाए। पोल्याण्डका कोजलोस्कीले १७ वर्ष २४६ दिनमा मैदान प्रवेश गर्दै नयाँ रकेर्ड कायम गरे।
रोनाल्डोको कीर्तिमान, गोल्डेन बुट र कोकाकोला प्रकरण
पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हंगेरीविरुद्धको खेलबाट तीन रेकर्ड बनाए। ३६ वर्षीय पोर्चुगिज कप्तान रोनाल्डो पाँच सिजनको युरोकप खेल्ने पहिलो खेलाडी बने। हंगेरीविरुद्ध २ गोल गर्दै युरोमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका रोनाल्डोले सर्वाधिक २४ खेल खेल्ने खेलाडीको रेकर्ड पनि आफ्नै नाममा दर्ता गराए।
युरोमा सर्वाधिक समय खेल्ने खेलाडी पनि बने रोनाल्डो। पोर्चुगलका लागि सर्वाधिक गोल गरेका उनी अहिले विश्वमै सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। उनले १०९ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्डसँग बराबरी गरे।
सम्पन्न युरोकपमा पाँच गोल गरेका उनले गोल्डेन बुट जितेका छन्।
खेलबाहेक एउटा पत्रकार सम्मेलनमा रोनाल्डोले कोकको बोतल हटाएर पानीको बोतल देखाएको प्रसंग पनि चर्चामा रह्यो । चर्चामात्र हैन यो प्रकरणले कोकाकोला कम्पनीलाई अर्बौ डलर घाटा लाग्यो। यो घटनापछि प्रतियोगिताको आयोजक यूईएफएले त्यसरी स्पोन्सरको बोतल हटाए जरिवाना गर्ने चेतावनी जारी गर्‍यो।
एक खेलमा रोनाल्डोले बनाए दुई रेकर्ड
लयमा फर्किएको इटाली र उपाधि
जुन ११ मा इटालीको रोम सहरबाटै सुरु भएको थियो युरोकप २०२०। उद्घाटन खेलसहित इटालीले समूह चरणका तीन खेलमा क्रमशः ३–०, ३–० र १–० को जित निकाल्यो। अन्तिम १६ मा अष्ट्रियालाई २–१ हरायो भने क्वार्टरफाइनलमा बेल्जियमलाई २–१ गोलले हरायो।
सेमिफाइनल खेलमा स्पेनसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको इटालीले टाइब्रेकरमा जित निकालेको थियो। उसले फाइनलमा पनि इङ्ल्याण्डसँग १–१ गोलको बराबरी खेलेपछि नतिजाका लागि टाइब्रेकरमा जानुपर्‍यो।
रसिया विश्वकपको छनोटबाटै बाहिरिएको इटाली पछिल्लो समय लगातार ३४ खेलमा अपराजित छ। प्रशिक्षकमा रोबर्टो मान्सिनी नियुक्त भएपछि उसले कमै मात्र हारेको छ। उसले सबैभन्दा धेरै खेलमा लगातार जित निकाल्ने राष्ट्रिय रेकर्ड पनि राखेको छ।
इटालीले सन् १९६८ जुन १० मा भएको दोस्रो खेलमा युगोस्लाभाकियालाई २–० गोलले हराउँदै महादेशीय प्रतियोगिता जितेको थियो। त्यसयता उसले युरोकप जितेन। सन् २००० र सन् २०१२ मा दुईपटक फाइनलमा हार व्यहोरेको थियो। उसले फिफा विश्वकप २००६ को उपाधि भने जितिसकेको छ।
‘हाम्रो लागि समय फर्किएर आएको छ,’ युरोकप सुरु हुनुअघि मान्सिनीले भनेका थिए, ‘समर्थकलाई सन्तोष दिन हामी जुलाईसम्म खेलमा सक्रिय रहनेछौं। जहाँ टिम महादेशीय प्रतियोगितको फाइनल पुग्नेछन्।’
इटाली फाइनल पुग्ने मात्र होइन उसले उपाधि नै जित्यो। उसले अहिलेसम्म चार विश्वकप र दुई युरोकप जितेको छ।
हंगेरी – कोभिडपछि रंगशालाभरि दर्शक!
ठूलो संख्यामा दर्शकको उपस्थितिबीच हंगेरीले सबै (चार) खेल सञ्चालन गर्‍यो। कोभिड महामारीपछि पहिलोपटक रंगशालामा कम्प्युटरबाट कसैको निगरानी गरिएन, होलोग्राम राखिएन र टेलिभिजनमा आर्टिफिसियल ध्वनी राखिएन।
हंगेरीले ६१ हजार दर्शक क्षमताको पुस्कर एरिना रंगशालामा पाहुना टिमसँग खेल्यो। बाँकी खेलका लागि पनि पूरै टिकट बिक्री खुल्ला गरियो।
यो सबै हंगेरीको महत्वाकांक्षी भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमले सम्भव भएको थियो। किनभने ९८ लाख जनसंख्या भएको देशमा लगभग ५३ लाखले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लिइसकेका थिए। यसबाहेक फाइनल खेलमा पनि लन्डनको बेम्बली रंगशालमा ६१ हजार समर्थक उपस्थित थिए।
समूह एफ : ‘ग्रुप अफ डेथ’ को डेथ
युरोकपको समूह एफमा जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल र हंगेरी सामेल थिए। सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने यी फाइनलमा भेट हुने सम्भावना बोकेका टिम हुन्। त्यसैले उपाधि दाबेदार मानिएका जर्मनी, फ्रान्स र पोर्चुगलमध्ये एक टिम अर्को चरणमा नजाने हो कि! भन्ने आशंकाले यो समूहलाई ग्रुप अफ डेथ भनिएको थियो।
भाग्यवश, समूहमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका फ्रान्स जर्मनी पोर्चुगल नै अर्को चरणमा पुग्न सफल भए। जहाँ फ्रान्सले अपराजित रहेर पाँच अंक बनायो भने जर्मनी र पोर्चुगलले समान ४–४ अंक जोडे।
उनीहरुमध्ये कुनै टिम फाइनलमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो। तर यी तीनै टिम अन्तिम १६ मै अड्किए।
प्रिक्वार्टरफाइनलमा ठूला टिमको अवसान
पोर्चुगल, फ्रान्स, इङ्ल्याण्ड र नेदरल्यान्ड्सजस्ता बलिया टिमका लागि प्रिक्वार्टरफाइनल खेल विर्सिनलायक बने।
युरोको सर्वाधिक गोलकर्ता हुँदै नेदरल्यान्ड्स चेक गणतन्त्रसँग पराजित भयो। मुख्य प्रतियोगितामा जर्मनीले १९६६ पछि इङ्ल्याण्डसँग यो क्वार्टरफाइनलमै पहिलो हार बेहोर्‍यो। पोर्चुगल ३२ वर्षपघि बेल्जियमसँग हार्‍यो भने केलियन एम्बाप्पेले पेनाल्टी मिस गरेपछि विश्व विजेता फ्रान्सको पनि युरोकपको यात्रा रोकियो।
त्यसो त फ्रान्सले अतिरिक्त समयसम्म स्वीट्जरल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो। तर टाइब्रेकरबाट नतिजा चाहिएपछि रेफ्रीले दिएको १० पेनाल्टीको अवसर एम्बाप्पेले मात्र खेर फालेका थिए।
अन्तिम १६ अन्तर्गत क्रोएसिया र स्पेनको खेलमा ८ गोल भएको थियो। जुन यो प्रतियोगिताकै सबैभन्दा धेरै गोल थियो। युरोको सर्वाधिक गोलचाहिँ ९ गोल हो जुन पहिलो संस्करणमा युगोस्लाभिया र इङ्ल्याण्डको खेलमा भएको थियो। त्यसपछिको यो दोस्रो धेरै गोल हो। त्यो खेलमा हार बेहोरेको क्रोएसिया पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। बलियो टिम बेल्जियम क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरियो भने स्पेन सेमिफाइनलबाट।
पहिलोपटक ११ सहरमा प्रतियोगिता
प्रतियोगिता पहिलोपटक युरोपका ११ देश र ११ सहरमा आयोजना गरिएको थियो। जसमा इटालीको रोम, नेदरल्याण्डसको आमस्टरडम, अजरबैजानको बाकु, स्पेन सेभिया, रोमानियाको बुखारेस्ट, हंगेरीको बुडापेस्ट, डेनमार्कको कोपनहेगन, स्कटल्यान्डको ग्लाज्गो, जर्मनीको म्युनिख, रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्ग र लण्डनमा खेल खेलाइयो।
युरोकप सुरु भएको ६० वर्षको उपलक्ष्यमा यूईएफएले विभिन्न ११ ठाउँमा आयोजना गरेको थियो। यद्यपी सेमिफाइनल र फाइनलका खेल भने इङ्ल्याण्डको बेम्बली रंगशालामा भए ।
आत्मघाती गोलको लहर
यो युरोकपमा गोलको सुरुआत नै आत्मघाती गोलबाट भयो। जब उद्घाटन खेलमा इटालीले पाहुना टिम टर्कीसँग रोमस्थित घरेलु मैदानमा खेल्दै थियो। ५३ औं मिनेटमा विपक्षी टिमका डिफेन्डरले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि इटालीले अग्रता बनायो।
टर्कीका मिरेही डिम्रियलले बल क्लियर गर्ने क्रममा आफ्नै पोस्टमा गोल गरेको खेल इटालीले ३–० गोलले जितेको थियो। योसँगै सुरु भएको संस्करणमा ११ आत्मघाती गोल भए।
पोर्चुगल–जर्मनी र स्पेन–स्लोभाकियाको खेलमा त २–२ वटा आत्मघाती गोल भए। एक गोलको अग्रता बनाएको अवस्थामा पोर्चुगलले दुईपटक आत्मघाती गोल गरेपछि जर्मनीले थप दुई गोल गर्दै जित निकालेको थियो।
त्यस्तै, युरोकपमा गोलका लागि संघर्ष गरिरहेको स्पेनले आत्मघाती गोलको सहारामा अग्रता बनाएपछि स्लोभाकियाविरुद्ध पाँच गोल पुरा गरेको थियो।
समूह ई कै खेलमा स्लोभाकियाले पोल्यान्डबाट आत्मघाती गोल उपहार पाएको थियो। त्यो स्लोभाकिया र पोल्यान्डबीच भएको खेलको पहिलो गोल थियो। त्यसको सहयोगमा पोल्यान्डले २–१ गोलको जित निकाल्यो।
फ्रान्स र जर्मनीबीचको निकै प्रधिस्पर्धात्मक खेलमा पनि म्याट म्युमिल्सले आत्मघाती गोल गरेपछि फ्रान्सले जितेको थियो। अर्थात् त्यो खेलको निर्णयक गोल नै आत्मघाती थियो।
त्यस्तै, फिनल्यान्ड–बेल्जियमको खेलमा पनि आत्मघाती गोल भए। क्रोएसिया र स्पेनको अन्तिम १६ को खेलमा पनि स्पेनका पेड्रीले खेलको पहिलो हाफमा आत्माघाती गोल गरे। क्वार्टरफाइनलमा स्पेनविरुद्धको खेलमा स्वीट्जरल्यान्डका डेनिस जकारियाले आत्मघाती गोल गरे।
युरोकपमा यसअघिका १५ संस्करण (सन् १९६० देखि २०१६ सम्म) जम्मा ९ वटा आत्मघाती गोल भएका छन् । तर युरोकप २०२० को एकै सिजनमा ११ आत्मघाती गोल भए।
गोल गर्न चुकेका स्टार खेलाडी
वेल्सका फरवार्ड ग्यारेथ बेलले यो प्रतियोगितामा गोल गर्न सकेनन्। बेलको कप्तानीमा रहेको वेल्सले अन्तिम १६ मा डेनमार्कसँग ४-० गोलको हार बेहोरेपछि ऊ बाहिरिएको थियो। रियलबाट थुप्रै उपाधि जितेका उनले युरोकपमा गोल गर्न सकेनन्।
त्यस्तै, दुई सिजनबाट पटकपटक चोटले सताएका बेल्जियमका फरवार्ड इडेन हजार्डले पनि गोल गर्न सकेनन्। २०१८ मा चेल्सीबाट रियल मड्रिड पुगेका उनले गोलविहीन बन्दै युरोकपको अन्त्य गरे।
पोर्चुगलका ब्रुनो फर्नान्डेज र जोआ फेलिक्सले पनि गोल गर्न सकेनन्। पछिल्लो सिजनको ईपीएलमा १८ गोल गरेका ब्रुनोले युरोमा सम्झनलायक प्रदर्शन गरेनन्। फेलिक्स पनि गोल गर्नबाट चुके।
गोल गर्न नसक्ने मध्येका सबैभन्दामा चर्चामा रहे केलियन एम्बाप्पे। उनले पेनाल्टीमा गोल गर्न नसकेपछि फ्रान्सले युरोमा हात धुनुपरेको थियो।
स्वीट्जरल्याण्डविरुद्धको त्यो खेल टाइब्रेकरमा पुगेपछि एम्बाप्पेबाहेक सबैले पेनाल्टीबाट स्कोर गरेका थिए।
त्यस्तै, गोल गर्न नक्नेमा अर्को स्टार खेलाडीमा जर्मनीका थोमस मुलर पनि रहे। अन्तिम १६ मा इङ्ल्याण्डसँग पराजित हुँदै घर फर्किएको जर्मनीका भरपर्दा र अनुभवी खेलाडी मुलरले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न सकेनन्।
यी स्टार खेलाडी, जसले जारी युरोकपमा गोल गर्न सकेका छैनन्
एलजीबीटीक्यू मुद्दाको प्रभाव
जुन २८ मा विश्वभरिका समलिंगी र एलजीबीटीक्यू समूदायले यो दिनलाई विशेष रुपमा मनाउँछन्। त्यो दिनको आसपास युरोकपमा केही खेल थिए। यसकारण एलजीबीटीक्यूको मुद्दाले पनि फुटबलमा बहस छेड्यो।
यूईएफएले अध्ययन गर्नुपर्‍यो। अजरबैजान र रसियामा समलिंगी विरोधी कानुन भएकाले त्यहाँ इन्द्रेणी रंगको झण्डा प्रयोग नगर्न यूईएफएले स्पोन्सरलाई आग्रह गरेको थियो। अजरबैजानको बाकूमा भएको एक खेलमा समर्थकले ‘गे प्राइड फ्ल्याग’ (एलजीबीटीक्यूको प्रतिक मानिने झण्डा) देखाएपछि उनीहरुलाई सुरक्षा गार्डले त्यसरी नदेखाउन चेनावनी दिए। बाँकी देशमा त्यस्तो प्रतिबन्ध थिएन।
एलजीबीटीक्यूको प्रदर्शन धेरै खेलमा देखियो।
के हो एलजीबीटी मुद्दा, जसले बुडापेस्ट र म्युनिखको फुटबलमा हंगामा मच्चायो
र, इङ्ल्याण्डका ‘हुल्लडबाज’ समर्थक
डेनमार्कविरुद्धको सेमिफाइनल खेलमा इङ्ल्याण्डमा समर्थकले फुटबलको स्पिरिटलाई दख्खल पुग्ने काम गरेका थिए। इङ्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टी प्रहार गरिरहँदा समर्थकले डेनमर्कका गोलकिपर क्यासप्र समरसलको आँखामा लेजर लाइट लगाएका थिए।
वेम्बलीको फाइनल खेलपछि लण्डन महानगर प्रहरीले ठूलो संख्यामा भेला भएका टिमटविहीन समर्थकले वेम्बलीमा तोडफोड गरेको बताएको छ। उनीहरु जबरजस्ती गेटबाट भित्र पस्न खोजेका थिए।
त्यस्तै, रासफर्ड, साञ्चो र साकाले पेनाल्टी मिस गरेपछि इङ्ल्याण्डका समर्थले उनीहरुमाथि रंगभेदी टिप्पणी गरेका थिए।
यो सिजनमा नेदरल्याण्डका भर्जिल भान डाइक, स्पनेका सर्जियो रामोस र अन्सू फाटी, स्वीडेनका ज्लाटन इब्राहिमोविच तथा जर्मनीका मार्क आन्द्रे टेर स्टेगेन चोटका कारण यो युरोमा खेल्न सकेनन्।
त्यस्तै जर्मनीकै मार्को रिउसले ब्रेक लिएका थिए भने स्लोभानियाका जन ओब्लक, नर्वेका मार्टिन ओडेगार्ड र इर्लिङ ब्रुट हाल्यान्ड युरोकपमा छनोट हुन सकेनन्।
नर्थ म्यासेडोनिया पहिलोपटक युरोकपमा पुगेको थियो। तर उसले समूह चरण पार गर्नै सकेन। त्यस्तै, अष्ट्रिया पहिलोपटक युरोकपको अन्तिम १६ मा पुगेको थियो भने
इङ्ल्याण्डले ५५ वर्षपछि जर्मनीलाई जित्यो। उसले २५ वर्षपछि पहिलोपटक सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। र, ५५ वर्षपछि फाइनल खेले पनि उसले उपाधि जित्न सकेन। इङ्ल्याण्डका कप्तान फेरि एकपटक उपाधिविहीन रहे।